Global Voices teny Malagasy » Tambajotran’i Kaokazy: Bilaogera Ao Grozny, Ali Suleymanov · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Desambra 2013 2:20 GMT 1	 · Mpanoratra Mari Bst Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Hevitra, Mediam-bahoaka, Saripika, Zavakanto & Kolontsaina, Akon'ny RuNet
Ali Suleymanov, 1 Jolay 2013, sary avy amin'i Sergey Ponomarev.
Ity lahatsoratra ity dia ao anatin'ny fanadihadian'ny RuNet Echo  momba ny tontolom-bilaogin'i Kaokazy avaratra. Savasavao ny tatitra feno sy ny tantara manokana ao amin'ny pejy Tambajotran'i Kaokazy .
28 taona i Ali Suleymanov, “Archidesigner “[mpahay maritrano sy mpanaingo trano] teraka tao Tsetsenia, nandany ny fahatanorany tao amin'ny faritr'i Moskoa izy, nandia fianarana tao ary niasa toy ny mpanaingo tokontany. Niaina ny hafangainam-pandehan'ny fiainana an-tanàndehibe tao Moskoa izy, nanatrika fampiratiana, hetsika ara-kolontsaina, ary nandehandeha an-tongotra sy niampita sambo fandehanan'ny maro tao an-tanàna. Raha niverina tao Grozny i Suleymanov, dia nahita fomba fiaina samihafa tanteraka izay tsy mitovy tamin'ny fahazarany tao Moskoa. Somary tambanivohitra ny fiainana ao Grozny raha atao ny fampitahana, ary nonina manodidina ny tanàndehibe i Suleymanov, ka ataony toy ny kilalao ny diany isan'andro tamin'ny fandehanana fiara iombonana mitondra azy nivezivezy nitsangatsangana manerana an'i Moskoa. Tamin'ny fikasany faharoa hipetraka tao Tsetsenia (niverina tao Moskoa izy herintaona taorian'ny nanandramany hipetraka tany), nanomboka nanao bilaogy izy mba handrakitra an-tantara izay zavatra hitany tany Grozny sy handahatra ireo antenainy ho hitany indray andro any ao an-tanàna. Manana feo mivatambatana saingy manome mampafantatra zavatra maro ny bilaoginy amin'ny teny rosiana.
Amin'ny fomba fitenin'i Suleymanov manokana, miresadresaka indrindra indrindra ilay tanàndehibe avy amin'ny fijerin'ny mpanaingo ny bilaoginy:
Ankoatra ny zava-drehetra, mikasika an'i Grozny ny bilaogiko. Miresaka izay mitranga ankehitriny ao an-tanàna amin'izao fotoana izao. Ankoatra izany dia mijery ny tanàna manokana avy amin'ny fijerin'ny matihanina aho. Liana amin'ny maritrano, ny fanaingoana, ny fomba fiaina an-tanàndehibe ary ny tantara aho. Liana manokana indrindra amin'ny fahitana sy fampisehoana izay zavatra tsy dia hitan'ny ankamaroan'ny vahoaka aho – zavatra izay tsy voamarika. Mahaliana indrindra ny mahita ireo sisa tavelan'ny talohan'ny ady na mahita zavatra “ambadiky ny sehatra” ao an-tanàna.
Tahaka ireo bilagera hafa ao amin'ny faritra, tahaka an'i Hard Ingush sy Svetlana Anokhina, safidy tsy nila fandinihana lalina ny fanapahan-kevitr'i Suleymanov hanao ny LiveJournal ho habaka fibilaoginy. Satria efa ao anatin'ny LJ (LiveJournal) avokoa ny ankamaroan'ireo bilaogera ankafiziny, nikasa hoazy ho anisany ao anatin'izany tontolo izany ihany koa izy. Tsy dia fantatr'i Suleymanov manokana avokoa ny ankamaroan'ireo mpamaky azy, saingy mino izy fa matihanina amin'ny kolontsaina tahaka azy avokoa ny maro amin'izy ireo. Nilaza izy fa ny tombotsoa lehibe amin'ny fibilaogina ( izay nofaritany, ho zavatra tsara niainana amin'ny ankapobeny) dia ny mahita fa misy ireo olona mitovy hevitra ao Grozny. Ho an'i Suleymanov, nanampy tamin'ny famenoana ny banga navelan'ireo zava-niainany tao Moskoa ny fanaovana bilaogy, ary nitondra tany amin'ny hevi-baovao maha-matihanina azy ny fahavononany miaraka amin'ny Aterineto:
Nanampy tokoa ny fanaokoa an-tserasera – tsy mivantana matetika, fa ankolaka. Nanomboka tamin'ny filazana izay mahaliana ahy aho ary nikendry ny hitady zavatra vaovao (ivelan'ny aterineto), ary nanomboka nifampihaona tamin'olona tena mahaliana. Fa, tsy mihaona amin'ny mpamaky ahy aho – fa ny mifanohitra amin'izany: mihaona amin'olona vaovao aho, izay maharre ny momba ny bilaogiko aorian'izany, ary maro amin'izy ireny no lasa liana.
Raha nanontaniana momba ny sivana, nilaza mbola tsy niharany i Suleymanov na dia indray mandeha aza, ary nanazava fa mifady ireo lohahevitra “mety hampisy olana” amin'ny asany antserasera. Hoy izy raha nanontaniana momba ny fandrahonana mety hisian'ny sivana:
Tamin'ny zava-niainako manokana, mbola tsy nihatra tamiko izany. Miezaka tsy hihoatra amin'izay mety hiteraka olana aho.
Nanazava ihany koa i Suleymanov fa mifady ireo lohahevitra sasany izy noho ny tahotry ny fanakorontanana ny tombotsoa manohina sy mahery vaika ao an-toerana:
Liana amin'ny lohahevitra isan-karazany mikasika ny fanajariana sy ny fikojakojàna ny tanàna, fitateram-bahoaka, fiasan'ny sampan-draharaham-panjakana, sy ny sisa aho. Fantatro tsara fa ny tsikera matotra momba ireo sehatra ireo dia miantefa mivantana na ankolaka any amin'ireo andrim-panjakana, fikambanana sy manampahefana voakasika. Matetika mikasika ny fanodikodinam-bola sy fandrobàna harena izany. Tsy miresaka ireo lohahevitra ireo aho.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/12/12/55592/
 Tambajotran'i Kaokazy: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/the-caucasus-network/